Chikumi 15, 2018 arun
Venezuela monitors Maakaundi Okubhengi kuti crypto kwema
Hurumende Venezuela akatanga vachiongorora kubhangi nhoroondo vemo kuti cryptocurrency chokuita kwema.
Nhoroondo dzezvakaitika kuti dzine crypto kwema panguva mitengo iyo hurumende anofunga kuti "kukoromora National mari" vachava "zvikuru kurangwa,"Vice President Tarek El Aissami Said.
Crypto basa & twa digitization kambani AlphaPoint anomutsa $ 15M mu mari
Crypto Services kambani AlphaPoint zvinobudirira vanomutswa $15 miriyoni ayo makuru ose asingashumbi guru mari yokutanga.
Mari itsva kuchabatsira AlphaPoint mberi kwayo basa yokushandisa blockchain zvigadzirwa kuti digitize zvavo zvose zvetsika uye hwava misika.
AlphaPoint akamutsa Mari kuburikidza billionaire uye vaimbova maneja ruzhowa Fund Michael Novogratz raMwari Galaxy Digital, okuzvifunga kurondedzerwa cryptocurrency mushambadzi kubhengi.
Galaxy Digital yamaneja Greg Wasserman akati “The musika mukana digitizing illiquid zvinhu zviri kwazvo. Vatengi vari kuda kuwana mikana, pachena uye chivimbo. Mabhizimisi vanotsvaka wakawedzera liquidity pamwe kuderedzwa kubiridzira, pangozi uye mutengo.”
“Tiri munzvimbo tanga chinokosha kwokushanduka misika yemari nokuda digitization kuti zvinhu … tiri kufara kuti mudiwa pamwe AlphaPoint sezvo tikaramba kubatsira kudzinga kuchinja echimurenga mune digitaalinen mumisika.” Novogratz akati mupepanhau.
Billionaire investor Tim Draper anotsanangura sei Bitcoin kuchasvika $250,000 mu 2022
Billionaire asingashumbi capitalist Tim Draper anoti Bitcoin kuchasvika $250,000 kubudikidza 2022.
mashoko Draper uko akaita panguva bvunzurudzo musi June 12th, iye kaviri pasi imwe yapfuura achifanotaura - achiti kuti Bitcoin asingadi chete kusvika kupera 2018 wokutengesera pa $25,000, asi kuti cryptocurrency pre-inozvikudza kwaikodzera kota miriyoni emadhora chete papera makore matatu.
Draper akanga ati "Cryptocurrencies ndiwo anotevera guru rwokugadzirwa tectonic kusuduruka uye hurumende kuti nokuyera vanofanira kudzivirira vanoita avo vanofanira ubatanidzwe ichi mukana zveupfumi Powerhouse ndechokuti crypto. Ndinotenda cryptocurrencies ndichagovera zvandapamba Fiat mari mu anotevera mashanu makore manomwe. "
Oxford ari kukudziridza yunivhesiti pamusoro blockchain
Boka mapurofesa uye vatsvakurudzi Oxford University vari kushanda pamwe chete kuti pave wekutanga Blockchain University kwenyika.
The chikwata anotsvaka dhigirii-kupa masimba kubva regulators mukati European Union.
The chikwata hunange chimuka Joshua Broggi, muvambi Woolf Development uyo akati, Yunivhesiti achafanana "yli Kwevadzidzi uye Airbnb kuti zvidzidzo", kwose, Broggi anotarisira kuti vaperekedzi vanoda kudzidzisa kuburikidza blockchain pfungwa aigona mari kumwe pakati $50,000 uye $100,000 chete kuburikidza kudzidzisa nyaya yavo… Pakupedzisira Chinangwa chacho ndechokuti kuva mutyairi mikana basa nokuchengeteka kuti zvidzidzo, uyewo rweruzhinji nzira kuti vadzidzi. "
By utilizing blockchain Michina, Yunivhesiti vachamhanya pamusoro akangwara zvibvumirano kuti chinangwa kuti dzidzo yakawanda yakajeka uye zvikuru democratic.
Editing error at 9:13 rubato ...
Wiley Bramlette anoti:
Chikumi 24, 2018 pa 6:51 PM
Chikunguru 18, 2018 pa 12:36 AM
Gunyana 5, 2018 pa 5:39 PM